Rusaruro—Dambudziko Riri Munyika Yose
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kisonge Kongo Korean Kwangali Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA: RUSARURO RUCHAPERA RINI?
JONATHAN, murume akaberekerwa kuAmerica nevabereki vokuKorea aisarurwa kubva achiri mwana. Paaikura, akatsvaka nzvimbo yokuti vanhu vaisazomusarura pamusana pechitarisiko chake kana kuti rudzi rwake. Akava chiremba mune rimwe taundi rokuchamhembe kweAlaska, kuU.S.A. uko kwaiva noruzhinji rwevarwere vaaizobatsira rwainge rwakafanana naye pachitarisiko. Aifunga kuti aizotiza kusarurwa nokuenda kunzvimbo iyoyo.
Zvaaitarisira zvakazoenda nepamwe paakarapa mumwe mukadzi aiva nemakore 25. Mukadzi wacho paakapepuka, akatarisa Jonathan kumeso ndokubva ataura mashoko ekutuka, achinyatsoratidza kuvenga kwaakanga akaita vanhu vokuKorea. Chiitiko ichi chakayeuchidza Jonathan nenzira inorwadza kuti zvose zvaakanga aita kuti atame uye aitewo sevamwe vanhu vaiva vakamupoteredza zvaisamubatsira kutiza rusaruro.
Zvakaitika kuna Jonathan zvinobudisa pachena chokwadi chinorwadza chokuti rusaruro runowanika kwose kwose panyika. Zvinoita sokuti pose pane vanhu pane rusaruro.
Pasinei nokuti rusaruro ruri kwose kwose, vanhu vakawanda havatomborufariri. Zvechokwadi, idzi ipfungwa mbiri dzinopikisana. Chinhu chisingafarirwi nevanhu zvakadaro chingagopararira sei? Zviri pachena kuti vakawanda vasingafariri rusaruro havazvioni kuti ivo vatori narwo. Ungavawo narwo here? Ungapindura sei mubvunzo iwoyo?
CHII CHINONZI RUSARURO?
Vanoita zvokutsvakurudza vanotambudzika nokutsanangura rusaruro. Vamwe vanoti “rusaruro maonero akashata anoitwa munhu zvichibva pakuti anenge ari werimwe boka.” Vamwewo vanoti maonero aya anobva pakuti munhu anenge “asina mashoko akakwana,” zvoita kuti abve ati “vanhu verimwe boka vakaipa.” Chero zvazvingareva, rusaruro runogona kuitwa pachitariswa rudzi rwemunhu, uremu hwake, kuti murume kana mukadzi, mutauro, chitendero, kana chero chimwe chinhu chingaita kuti vanhu vasiyane.
DAMBUDZIKO ROMUNHU MUMWE NOMUMWE
Tingava tichizviziva kana kuti kwete, hazvisi nyore kuziva kuti tine rusaruro mumwoyo medu. Bhaibheri rinotsanangura chinoita kuti zviome richiti: “Mwoyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose.” (Jeremiya 17:9) Saka tinogona kuzvinyengedza tichitaura kuti tinofarira vanhu vemarudzi ose. Kana kuti tinogona kuzvipembedza tichiti tine chikonzero chakanaka chokuti tisafarira vamwe vanhu.
Waizonzwa sei dai waizosangana nemamiriro ezvinhu akadai?
Kuti tione kuti zvakaoma sei kuti tizive kana tiine rusaruro mumwoyo medu, chimbofungidzira muenzaniso uyu: Uri kufamba mumugwagwa uri wega usiku. Pane varume vechiduku vaviri vausingazivi vari kuuya kuzosangana newe. Vanoratidza kuti vakasimba uye mumwe wavo anoita seane chaakabata.
Unofunga kuti varume ava vangangokukuvadza here? Ichokwadi kuti zvakamboitika kwauri zvinokuita kuti ugare wakachenjerera, asi izvozvo ndizvo zvinoita kuti ubve wati varume vaviri ava havana kunaka here? Mumwe mubvunzo ungabatsira kubudisa chokwadi ndewokuti, Wafunga kuti varume vacho vangangova verudzi rupi? Mhinduro yako inogona kubudisa chokwadi. Inogona kuratidza kuti wakatovhiringwa nerusaruro.
Kana tichinyatsotaura chokwadi, tinofanira kubvuma kuti tose zvedu tine rusaruro rwakasiyana-siyana. Kunyange Bhaibheri rinobvuma rumwe rusaruro rwakazara muvanhu parinoti: “Vanhu vanotonga vamwe nezvavanoona kunze.” (1 Samueri 16:7, Contemporary English Version) Sezvo tose zvedu tiine dambudziko iri uye richiwanzotipinza muna taisireva, pane tariro here yokurikunda kana kutoripedza? Zvichazomboitika here kuti nyika yose inenge isisina rusaruro?
RUSARURO RWURI MUNYIKA YOSE
Canada: “Pasinei nokuti [nyika yacho] ine vanhu vemarudzi akasiyana-siyana uye iri kuisa mitemo inodzivirira kodzero dzevanhu munzvimbo dzine vanhu vemarudzi akasiyana-siyana, urudzi ndihwo chipingamupinyi chikuru chinokanganisa kodzero dzevanhu.”—Amnesty International briefing on Canada, 2012.
Europe: “Vanhu 48 muzana vokuEurope vanofunga kuti hapana zviri kumbonyatsoitwa kuti dambudziko rokusarurana ripere munyika yavo.”—Intolerance, Prejudice and Discrimination: A European Report, 2011.
Africa: “Kuitirwa chisimba nekusarurwa kwevakadzi kwakapararira munyika dzakawanda.”—Amnesty International Report 2012.
Nepal: “VaDalit (vanhu vanotarisirwa pasi uye vanodzvinyirirwa) vanosarurwa kwose kwose, kunyanya panyaya dzemari, dzemagariro, uye dzetsika.”—Human Rights Watch World Report, 2012.
Eastern Europe: “Vanhu vekumabvazuva kweEurope vanopomerwa zvakaipa kana vari mune dzimwe nyika uye kana vari munyika dzavo vanosarurwa asi hapana wezvematongerwo enyika anoda kugadzirisa dambudziko racho.”—The Economist, September 4, 2010.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Rusaruro—Dambudziko Riri Munyika Yose
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI Rusaruro Ruchapera Rini?